बागलुङ बजारको आवासीय घरमा पेट्रोल पम्प ! « Nepal Bahas
बागलुङ बजारको आवासीय घरमा पेट्रोल पम्प !
प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७८, बुधबार १४:२९
२० असोज, गलकोट । बागलुङ बजारको आवासीय घरमा पेट्रोल पम्प राखिएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले आवासीय घर भनेर निर्माण गर्न अनुमति दिएका स्थानमा पम्प सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । निर्माण सम्पन्न लिने समयमा पेट्रोल पम्प राखिदा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्रसमेत नगरपालिकाले दिएको छैन ।
मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण नगरेको र आवासीय घरमा पेट्रोल पम्प राखेपछि भवन पास नगरिएको नगरपालिकाका इञ्जिनीयर गौरव शर्माले जानकारी दिए । “आवासीय घर बनाउन अनुमति दिएका हौं, पछि पेट्रोल पम्प सञ्चालन प्रयोजनमा लागे, हामीले अनुमति नदिएर पटक–पटक पेट्रोलपम्प नराख्न आग्रह गरेका थियौं” उनले भने, “पेट्रोल पम्पको मापदण्ड के हो रु त्यो आयल निगमले हेर्ला तर आवासीय भनेर निर्माण गरेको घरमा पेट्रोल पम्प राख्न पाइदैन, अझ होटलनै सञ्चालनमा आएको समेत सुनेका छौं ।”
उनले पेट्रोल पम्प राखेको भवन नगरपालिकाले पास गर्न नसक्ने बताउछन् । विक्री केन्द्रका छेउछाउमा पर्खाल लगाएको हुनुपर्ने, विक्री स्थलमा महिला पुरुष शौचालय र पार्किङ लगायतको सुविधा हुनु पर्नेमा उक्त पूर्वाधारको समेत पेट्रोल पम्पमा अभाव रहेको पाइएको छ ।
विसं २०५१ मा अनुमतिपत्र ल्याएका कारण आफ्नो पेट्रोलपम्प सोही मापदण्ड अनुसारको भएको उनको दाबी छ । आफ्नो दुई रोपनी जग्गा भएको र मोहोडाकोसमेत मापदण्ड पुग्ने उहाँले जानकारी दिए ।
एमसीसी तत्काल संसदबाट पारित गर्न उद्योगीहरूको माग
बुद्ध एयरको जहाज सुर्खेतमा ल्याण्ड हुन नसकेपछि नेपालगञ्ज डाइभर्ट
घाँसे मैदानमा फसेको श्री एयरको जहाज निकाल्ने प्रयास जारी